Samsung Galaxy A71 ayaa dhowaan imanaysa iyada oo ay la socoto Exynos 980 iyo 5G taageero | Androidsis
Samsung uma muuqan mid aad ugu wanaagsan suuqa Shiinaha. Halkaas, saamigeeda suuqyadu waa mid hooseeya, marka loo eego kuwa soo saarayaasha kale ee casriga sida Huawei iyo Xiaomi. In kasta oo suuqa adduunka ay sii wadato inay isu taagto inay tahay shirkadda samaysa shixnadaha ugu badan ee taleefannada casriga ah, haddana marba marka ka dambeysa waxay lumineysaa ka dhex muuqashadooda macaamiisha waddankaas, tanina waxaa ugu wacan qiimaha aan wanaagsaneyn ee lacag badan qalabkaaga.
Way cadahay in Kuuriyada Koofureed ay qorsheyneyso inay xalliso dhibaatada hadda ku jirta Shiinaha, iyo mid ka mid ah kuwa soo socda ee caawin doona - waa la filayaa - waa Galaxy A71 5G, mobiil dhexdhexaad ah oo laga filayo processor-ka Exynos 980 iyo taageerada shabakadaha 5G. Qiimaha isku midka ah wuxuu noqon lahaa mid ka mid ah xooggiisa, sidaas darteed, waa in la filayo inuu ku guuleysto Shiinaha, laakiin maahan oo keliya, laakiin sidoo kale suuqyada kale ee lagu bixin doono.
Taxanaha Samsung ee Galaxy A ayaa si heer sare ah looga helay adduunka. Tani waxay saameyn aad u wanaagsan ku yeelatay dakhliga shirkadda, taasoo saadaalisay saadaal wanaagsan qeybta, in kasta oo xaqiiqda ah in iibka taleefannada casriga ahi hoos u dhac yar uu ku yimid muddooyinkan dambe, in kasta oo ay xaqiiqadu tahay horumarkii ugu dambeeyay ayaa la soo sheegay tan ka soo horjeedda.
Samsung Galaxy A71 ayaa dhowaan la soo saari doonaa, sida laga soo xigtay warbixinnadii ugu dambeeyay ee sidaas tilmaamaya. Kani wuxuu noqon doonaa terminal la imaan doona kan Exynos 980 chipset Octa-core oo bixisa waxqabadka heerka dhexe. Marka laga hadlayo isku xirnaanta, si loo raaco isbedelka cusub ee sii kordhaya ee sii kordhaya, waxay bixin doontaa taageero shabakadaha 5G.
Galaxy A90 5G: Qadka dhexe ee ugu horreeya ee leh 5G hadda waa rasmi
Si dhab ah looma garanayo goorta ay bilaabi doonto dhacdadan moodeelkani, laakiin hubaal maalmaha ama toddobaadyada soo socda waxaan heli doonnaa macluumaad rasmi ah oo ku saabsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Samsung Galaxy A71 ayaa goor dhow la imaan doonta Exynos 980 chipset iyo taageerada 5G
Google Podcast wuxuu ku darayaa xulashooyin badan oo dhacdooyin ah